Hondo yeVanhu Inosimudzira muIsrael? Tel Aviv Airport inoramba yakavharwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Hondo yeVanhu Inosimudzira muIsrael? Tel Aviv Airport inoramba yakavharwa
nhandare yendege • Kuputsa Israel Nhau • Kuputsa Nhau dzePalestine • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Hondo yeIsrael neHamas yePalestine iri kuwedzera muhondo yevagari vemo. Ndege dzinoenda kuTel Aviv dzirikumiswa uye vanhu vari kumhanyira kunzvimbo dzekuchengetedza kumativi ese ehondo.
Ndege dzese dzekutengesa kubva uye kuenda kuTel Aviv kwaBen Gurion Airport dzakamiswa uye dzakamiswa. Ndege dzinouya dzakatsaukira kuCyprus kana Girisi.
Kubva na6 am, kwakatangwa zana nemakumi masere emaroketi kubva kuGaza kuenda kunzvimbo yeIsrael, Israel Defence Forces yakashuma. Makumi mana ekuburitswa akawira mukati meGaza, zvakadaro. Angangoita 180 maroketi akadzingwa kuIsrael kubva Muvhuro manheru.
UN Security Council ichaita musangano wekukurumidzira neChitatu pamusoro pekuwedzera pakati peIsrael nevePalestine, muchikamu chechipiri chakadai mumazuva matatu, sekureva kwemapurisa neChipiri.
Kurwiswa kwemaarirosi uye kuputika kwakanzwika muTel Aviv pamwe nemumataundi eHolon neGivatayim.
Iyo yepamutemo State yeIsrael account yeaka twitter yakatumira: Kutumira kumbundiro huru kune vese veIsrael vari kumhanyisa kunobhomba matumba izvozvi. Tinewe uye ticharamba tichidzivirira vese vagari vedu.
United Airlines, Delta neAmerican Airlines, nedzimwe ndege dzenyika dzepasi rose dzambomisa ndege kuenda kuIsrael mushure mekunge nhandare yendege yeTel Aviv yaBen Gurion yarwiswa nemaroketi neChipiri manheru.
Hamas yakataura mutoro wekudzinga mazana ematombo kubva mukati meGaza kuenda kuTel Aviv mune izvo zvinoonekwa sekukura kukuru mukukakavadzana kuchangobva kuitika pakati pemativi maviri aya.